Blog – Himalayan Pictures
जानिराखौ ! के हो डेंगु राेग, यसकाे लक्षण र बच्ने उपाय
हिमालयन ब्युरो ,काठमाडौं । गत बैशाखमा धरानमा देखिएकाे डेंगुको संक्रमण अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ४२ जिल्लामा फैलिएको छ। डे‌गुका कारण ५ जनाकाे मृत्यु भइसकेकाे छ । तराईमा मात्र देखिने याे राेग पछिल्लाे समय पहाड र उपत्यकामा समेत देखिएकाे छ । यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको ज्वरो हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजि ...
दश प्रसिद्द प्रेरक भनाइहरू
असफलताबाट यदि तपाई निरास हुनुहुन्छ भने आउनुहोस जान्नुहोस यी जिबन बदल्ने प्रेरक भनाइहरु । १. सफलता कार्यसँग जोडिएको छ, सफल व्यक्तिहरू सधै कार्यरत् हुन्छन् । उनीहरूले थुप्रै गल्ती गर्छन् तर पछी हट्दैनन् । २. सपना देख्नेहरूनै संसारको रक्षक हुन् । – जेम्स आलेन ३. भविष्य तिनीहरूको पक्षमा हुन्छ जसले आफ्नो सपनाको सुन्दरतामा विश्वास गर्दछन् । – इल ...
तपाईँको जिन्दगी बदल्ने प्रेरेक भनाइहरु
प्रेरक भनाइ, प्रेरणादायी भनाई, मन छुने लाइनहरू, महान भनाइहरू जुन दिन तपाईं आफ्नो पूरा जिम्मेवारी लिनु हुन्छ, जुन दिन तपाईं बहाना बनाउन बन्द गर्नुहुन्छ, त्यसै दिन तपाईं शिखरतिरको यात्रा थाल्नुहुन्छ । – ओ.जे. सिम्पसन अब यो सोच्ने समय होइन कि तपाईंसँग के छैन । यो तपाईंहरूसँग जे जति छ यसबाट तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ । – अर्नेष्ट हेमिंग्वे जसले एक घण्टा मात्र ...
सके आर्थिक सहयोग गरौ , नसके सेयर गरौ , आर्थिक अभाबमा मृत्यु संगै लड्दै साइली तामाङ
नुवाकोट । तादी गाउँपालिका – ३ प्रभुडाँडाकी मिर्गौलापीडित ४६ वर्षीया साइँली तामाङले आफूलाई बचाउन सहयोगको याचना गरेकी छन् । डाइलसिस र औषधि किन्न खर्च अभाव भएको भन्दै पीडित साइँलीले देश/विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेकी हुन् ।
’घरमा भएको एउटा भैंसी बेचेर उपचार गरिरहेकी छु । श्रीमान्‌ले कहिलेकाहीं गर्ने ज्याला मजदुरीको आम्दानीले कोठाभाडा तिर्दैमा ठीक्क हुन्छ’ पीडित तामाङले भनिन्, ’ऋण दिने आफन्त पनि छैनन्, अब खर्च कसरी जुटाउनु ? ।’ उनको दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने अवस्थामा छ । नियमित डायलसिस र उपचारका लागि गाउँको घरमा ताला लगाएर श्रीमान् सानु तामाङसहित उनी काठमाडौं मनमैंजुमा डेरा लिएर बसेकी छन् । उनको गोगंबुस्थित नेसनल डाइलसिस सेन्टर प्रा.लि. मा उपचार भइरहेको छ ।
नेपालमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ५ लाख र भारतमा भारु ६ लाख पर्ने जनाइएको छ । प्रत्यारोपणपछि आजीवन महिनाको १५ हजार बराबरको औषधि खानुपर्ने नेसनल डाइलसिस सेन्टरका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा.उपेन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, मिर्गौलापीडित साइँली तामाङको परिवार र माइती पक्षका युवाहरुको मंगलबार भएको छलफलले सहयोग अभियान चलाउने निष्कर्ष निकालेको छ । मनमैंजुमै भएको छलफलले होमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ । अभियानको नाम ’मिर्गौलापीडित साइँली तामाङ बचाऔं अभियान’ राखिएको छ ।
मृर्गौलापीडित साइँली तामाङलाई सहयोग गर्न चाहनेले।बिरामी साइँली तामाङ- 9861283160
खाता नम्बर :- 16110701339998000001
यी हुन टिकटकमा भाइरल कान्तिपुरवाली – श्री पाण्डे
भाइरल हुने अनेक तरिका छन् । को कसरी कतिबेला भाइरल हुन्छ ठेगान नै हुदैन । अहिले सामाजिक संजालमा सुन्दरताको कारण भाइरल छिन टेलिभिजन प्रस्तोता श्री पाण्डे । कान्तिपुर टिभिमा समाचार बाचक पाण्डे अहिले टिकटकमा ट्रेण्डिङ्ग मा छिन । टेलिभिजन संगै पाण्डे मोडलिङमा समेत व्यस्त छिन । हेर्नुहोस भाइरल कान्तिपुरवाली पाण्डेका आकर्षक तस्बिर हरु । ...
धमला कि श्रीमतीले श्रीमानको खुट्टाको पानि खादा दुनियालाई के आपत्ति
हरेक चाडबाड मनाउने तरिका जमानाअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिन्दु महिलाहरुको महान चाड तीजको सवालमा पनि यस्तै कुरा लागु हुन्छ । यो चाडमा कतिले व्रत बस्छन् त कतिले बस्दैनन् । गरगहना र लुगा पनि आफ्नो इच्छाअनुसार लगाइएको हुन्छ । व्रत बस्ने भनिएको दिनमा श्रीमानसंगै अनेक परिकार खाएर घुमघाममा दिन बिताउनेदेखी निर्जल व्रत बसेर नाचगानमा रमाउनेको पनि आ आफ्नै भिड छ । विभिन्न व्यक्तिहरु चाडबाडप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गरि नै रहेका हुन्छन् ।
यस्तैमा चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी नायिका एलिजा गौतम ट्रोलको शिकार भएकी छिन् । उनले दिनभरी व्रत बसिसकेपछि साँझ आफ्नो श्रीमानको गोडा धोएर पानी खाएको तस्विर र भिडियो आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत सेयर गरेकी थिईन् । सोहि तस्विरमा उनलाई थुप्रै नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ भने कतिपयले उनको यो कामलाई संस्कारको नाम पनि दिएका छन् ।
अभिनेत्री पुजना स्त्री लेख्छिन्, बाहिर ठुला ठुला कुरा गर्ने फेसबुकमा भित्ताभरी आदर्शका कुरा लेख्नेहरु प्राय यस्तै मानसिकताका छन् । श्रीमती जीवनसाथी हुन की दास या कमारी हुन जनता जान्न चाहन्छन् । उनले सामन्ती ऋषि धमलाप्रति खेद प्रकट गर्छु भनेर पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
त्यस्तै कलाकार, निर्देशक निर्मल शर्मा ‘गैँडा’ लेख्छन्,“मैलै सानैबाट काठमाण्डौको भित्री शहरी भागमै देख्दै अनी सुन्दै आएको परम्परा हो यो, ईच्छा हुनेले गर्दा र ईच्छा नहुनेले नगर्दा पनी दुबैलाई नेपालको प्रचलित कानुनले अपराध मान्दैन”
श्रीमानको गोडाको पानी खाएकै कारण आफ्नो जोडी ट्रोलको शिकार भएपछि एलिजाले उक्त कुराको खण्डन गर्दै फेसबुकमा आफ्नो बिचार पोखेकी छिन् । आफुले सानैदेखी देख्दै र भोग्दै आएको कुरा भएको साथै परम्परालाई मान्नु नमान्नु आफ्नो इच्छाको कुरा भएको उल्लेख गर्दै एलिजाले यो अधिकार भएको बताएकी छिन् । आफ्नो श्रीमान्संगको खुशीको पलको तस्विर सेयर गर्दा अरुलाई किन आपत्ति भनेर उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।
दशैमा सौगात र सलोनको ‘घनचक्कर’
यसपालिको दशैंमा चलचित्र ‘घनचक्कर’ रिलिज हुने भएको छ । असोज १७ गतेअर्थात् फूलपातीको अघिल्लो दिन देशै भरिको हलहलमा सौगात मल्ल र सलोन बस्नेतको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र घनचक्कर सार्बजानिक प्रदर्शनमा आउन लागेको हो । चलचित्र घनचक्कर मार्फत नवनायिका कास्मिरा लामाले नेपाली रजतपट मा डेब्यु गर्दै छिन । कास्मिरा , सौगात मल्ल र सलोन संगै सरोज खनाल ...